Dyson ဟာသန့်စင်သော Cool Link ကိုလေတပ်သန့်လွှတ်တင် - သတင်း Rule
Dyson ဟာသန့်စင်သော Cool Link ကိုလေတပ်သန့်လွှတ်တင်
filter ပန်ကာဝတ်မှုန် clean up လုပ်ဖို့ဆို, ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်ဝေးလံခေါင်သီစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဘို့အရာ app ရဲ့အသစ်တခုကအင်တာနက်နှင့်အတူအနံ့, သူ့ရဲ့လက်ရှိစက်ရုပ်လေဟာနယ်ဆက်သွယ်ရာတွင်
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “Dyson ဟာအိမ်သူအိမ်သားလေကြောင်း clean up လုပ်ဖို့သန့်စင်သော Cool Link ကိုလေကြောင်းသနျ့ရှငျးစသောသူလွှတ်တင်” ရှမွေလသည် Gibbs နှင့် Damian Carrington ကရေးသားခဲ့သည်, theguardian.com ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ 30 မတ်လအပေါ်များအတွက် 2016 23.01 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
Dyson ဟာရဲ့အသစ်သန့်စင်သော Cool Link ကိုလေကြောင်းစင်ကြယ်စေပန်ကာသင့်အိမ်ရှိလေထုကို clean up ကတိပြု, ဒါပေမယ့်လည်းအမှုအရာများကိုအင်တာနက်ထဲသို့ဗြိတိသျှအင်ဂျင်နီယာကုမ္ပဏီ၏ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းခြေတစ်လှမ်း.
အဆိုပါသန့်စင်သော Cool Link ကို, စားပွဲခုံသို့မဟုတ်မျှော်စင်ဗားရှင်းနှစ်ခုစလုံးအတွက်လာရာ, ကုမ္ပဏီ၏ဇိမ်ခံပရိတ်သတ်တွေရဲ့ဗားရှင်းသစ်သည်နှင့်သင်၏အခန်းပတ်ပတ်လည်ကပေးပို့ခြင်းမပြုမီလေထဲကဖုန်ဖယ်ရှားပေးထားတဲ့ ultrafine filter ကိုထည့်သွင်း.
ဆေးရွက်ကြီးမီးခိုး, ဥယျာဉ်နှင့်မီးလောင်မှု, မှို, Aerosol နှင့်အိမ်သူအိမ်သားဓာတုပစ္စည်းများအားလုံးအိမ်တွင်ညစ်ညမ်း၏သိသာထင်ရှားသောအဆင့်ဆင့်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်.
High-end လေဟာနယ်မှတပ်ဆင်သူတို့အားအလားတူထုံးစံ၌အလုပ်လုပ်သော - - တက်ဖမ်းယူ Dyson ဟာသစ် activated ကာဗွန်နှင့် 360 ဒီဂရီဖန် HEPA filter ကိုကပြောပါတယ် 99.95% အိမ်တွင်လေထုထဲတွင်ညစ်ညမ်း၏, ဖုန်မှုန့်အပါအဝင်, အနံ့, ဓာတုပစ္စည်းများ, ဝတ်မှုန်, အထူးဖော်စပ်ထား, မီးခိုးနှင့် 0.1micron အခြားသူသို့မဟုတ်ပိုကြီးဘာမှ.
အဆိုပါပန်ကာအတွက်အခန်းတခန်းထဲမှာလေထုသန့်ရှင်းရေးနိုင်ပါတယ် 30 သို့ 60 ဒါကြောင့် degrades သောအခါအလိုအလျှောက်ပိုလုံခြုံအဆင့်ဆင့်ကကျောကိုရောက်စေဖို့လေထုအရည်အသွေးပြည့်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမိနစ်သို့မဟုတ်.
ကုမ္ပဏီတည်ထောင်သူဂျိမ်း Dyson ဟာ Said: "ကျနော်တို့ကကျနော်တို့ရဲ့အိမ်တွေပြင်ပညစ်ညူးသည်ထင်, ဒါပေမဲ့အတွင်းရှိလေထုကိုပိုဆိုးစေနိုင်ပါတယ်. Dyson ဟာအင်ဂျင်နီယာများကိုအလိုအလျောက် ultrafine တာမျိုးဖယ်ရှားပေးတဲ့သန့်ရှင်းစေသောဖွံ့ဖြိုးဆဲအပေါ်အာရုံစူးစိုက်, ထိုမိုးလုံလေလုံလေထဲကအနံ့နှင့်ညစ်ညမ်း, နောက်ကျောကိုသင်အမှန်တကယ်အချိန်လေထုအရည်အသွေးမြင့်ဒေတာအစာကျွေး။ "
ပန်ကာတည့်မှုဝေဒနာရှင်များအတွက်အထူးသဖြင့်အသုံးဝင်သောဖြစ်နိုင်ပါတယ်နှင့်တစ်ဦးကိုညဉ့် Mode ကိုကတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်အောင် setting ဖြစ်ပါတယ်နှင့်သုံးစွဲသူများအိပ်ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်သောအခါ, LED display ကိုမီးမှိန်.
ဟူဂို Wilson က, Dyson ဟာအဘို့ဒီဇိုင်းခဲ, ကပြောပါတယ်: "ခေတ်သစ်နေအိမ်များပိုပြီးဆူညံသံများနှင့်ထောင်ချောက်အပူဆန့်ကျင်တံဆိပ်ခတ်ခံရဖို့ built ပြီ, သောငါတို့သည်အိမ်မှာအတွင်း၌ဖန်တီးအညစ်ညမ်းလည်းပိတ်မိနေနှင့်ဖွင့်ထုတ်ခြင်းထက်ငါးဆပိုမိုညစ်ညမ်း္တုမှအဆင့်ဆင့်အထိတည်ဆောက်ကြသည်ကိုဆိုလိုသည်။ "
မိုးလုံလေလုံညစ်ညမ်းမှု၏သက်ရောက်မှုအဖြစ်ကောင်းစွာပြင်ပတွင်ညစ်ညမ်းမှုအဖြစ်နားမလည်ပေမဲ့, မကြာသေးမီက WHO ကသတင်းပို့ မိုးလုံလေလုံလေထုညစ်ညမ်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသို့မဟုတ်အထောက်အကူပြုစေခြင်းငှါအကြံပြု 99,000 ဥရောပတိုက်တွင်အချိန်မတန်မီသေဆုံးမှုဟာတစ်နှစ်ကို.
တစ်ဦးက 2012 လေ့လာချက် ဆငျးရဲသားအတွင်းလေထုအရည်အသွေးမြင့်အတွင်း၌ပန်းနာရောဂါအပေါ်ရေတိုရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိပါတယ်ပြသ, ချောင်းဆိုးရင်ကျပ်နာနှင့်နာတာရှည်အဆုတ်ရောဂါနှင့်, ပိုပြီးမရှိသလောက်, ရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ. သို့သော် အခြားအစီရင်ခံစာ လေထုအမြင်ကြည်လင်စေရန်ထံမှမတည်ငြိမ်သောအော်ဂဲနစ်ဒြပ်ပေါင်းများ၏ကျန်းမာရေးအပေါ်သက်ရောက်မှုများကပြောသည်, deodorants နှင့်သန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းများ "ယေဘုယျအားဖြင့်အသေးအဖွဲ" ခဲ့ကြ.
အဆိုပါ Dyson ဟာ Link ကို app ကိုလေထုအရည်အသွေးပြန်ကျွေးမည်, စိုထိုင်းဆနဲ့အပူချိန်ဖတ်ကြား, နှင့်သုံးစွဲသူများကိုအဝေးမှပန်ကာကိုထိန်းချုပ်ခွင့်ပြု. ဓါတ်ပုံ: Dyson ဟာ
အဆိုပါသန့်စင်သော Cool Link ကိုလည်းအရာ၏အလန်းလာသောအင်တာနက်ကိုသို့ Dyson ဟာရဲ့ entry ကိုခြေတစ်လှမ်း (IoT) ဗြိတိန်နိုင်ငံအတွက် iOS နှင့် Android များအတွက်၎င်း၏အသစ် Dyson ဟာ Link ကို app ကိုမှတဆင့်, အရာယခင်ကသာဂျပန်နှင့်အမေရိကန်အတွက်၎င်း၏စက်ရုပ်လေဟာနယ်သန့်စင်နှင့်အတူရရှိနိုင်ခဲ့.
ဒီ app သန့်စင်သော Cool Link ကိုပိုင်ရှင်တွေလေထုအရည်အသွေးပြည့်စောင့်ကြည့်ဖို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်, အိမ်အတွင်းအပူချိန်နှင့်စိုထိုင်းဆ, သတ်မှတ်ထားလေထုအရည်အသွေးအကန့်သတ်, လေထု clean up လုပ်ဖို့လေထုအရည်အသွေးပြည့်သမိုင်းကိုကြည့်ပါနဲ့အဝေးကနေတစ်ခုသို့မဟုတ်အချိန်ဇယားပေါ်မှာပန်ကာစတင်.
အဆိုပါ Link ကို app ကို Dyson ဟာရဲ့ချိတ်ဆက်ထုတ်ကုန်အချင်းချင်းစည်းလုံးညီညွတ်ရေးလိမ့်မည်, လက်ရှိနှစ်ခုရှိပါသည်ရာ, ဒါပေမယ့်ကုမ္ပဏီသူတို့အိမ်မှာမနေအဲဒီလိုလုပ်ခြင်းအားအသုံးပြုသူတစ်ထိန်းချုပ်မှုကိုကူညီသို့မဟုတ်လုပ်ရပ်ယူနားလည်ကြလိမ့်မည်သည့်နေရာတွင်သူ့ရဲ့ Wi-Fi ကို-enabled ထုတ်ကုန်လိုင်းတိုးချဲ့ဖို့မျှော်လင့်ထား. အဆိုပါ Link ကိုစနစ်ကလက်ရှိကဲ့သို့သောအခြား IoT စနစ်များနှင့်အတူပေါင်းစပ်ပါဘူး Samsung ရဲ့ SmartThings အချက်အချာ သို့မဟုတ် Apple ရဲ့ HomeKit, သို့သော်.
အဆိုပါ Dyson ဟာသန့်စင်သော Cool Link ကိုသနျ့ရှငျးစသောသူပန်ကာတစ်ခုံမော်ဒယ်£ 350 ကုန်ကျနှင့်ပိုကြီးရဲတိုက်ဘို့£ 450 လိမ့်မည်, စျေးကွက်၏မြင့်အဆုံးမှာသောနေရာအရပ်က, In-line ကကုမ္ပဏီ၏အခြားပရိသတ်တွေနှင့်အတူ, အပူပေးစက်နှင့် humidifiers. အဆိုပါ£ 50 က filter ကိုပန်ကာ 12-နာရီနေ့အဘို့ကို run တဲ့အခါမှာတစ်နှစ်တစ်ကြိမ်ပတ်ပတ်လည်ကိုပြောင်းလဲခံရဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်, စက်ကို app နှင့် display ကိုတဆင့်သုံးစွဲသူတွေကိုအကြောင်းကြားပါလိမ့်မယ်ရာ.
Dyson ဟာကြော်ငြာယူတာပဲ, စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်
Dyson ဟာပူ + အေးမြ AM09 ပြန်လည်သုံးသပ်: ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးအပူပေးပန်ကာ?
Dyson ဟာ Cool AM06 ပြန်လည်သုံးသပ်: ဒီကမ္ဘာ့အများဆုံးဇိမ်ခံစားပွဲခုံပန်ကာသည်?
31634	5 အပိုဒ်, Damian Carrington, Dyson ဟာ, Ltd, ပတ်ဝန်းကျင်, ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, အရာဖြင့်အင်တာနက်, သတင်း, ညစ်ညမ်းစေခြင်း, ရှမွေလသည် Gibbs, နည်းပညာ
← ချစ်ခြင်းမေတ္တာများအတွက်လိုက်ရှာ? Manspreading အောင်မြင်မှုရဲ့သော့ချက် Be နိုင် ထိပ်တန်း 20 iPhone နဲ့ iPad App များနှင့်လ၏အားကစားပြိုင်ပွဲ →